२८ लाखे भवनको फायल नै लुकाए कर्मचारीले, जनप्रतिनिधी देखि कर्मचारी सम्मको मिलेमतो (भिडियो सहित) - Pradesh Dainik
२८ लाखे भवनको फायल नै लुकाए कर्मचारीले, जनप्रतिनिधी देखि कर्मचारी सम्मको मिलेमतो (भिडियो सहित)
बुधबार, साउन ०७, २०७७ , प्रदेश दैनिक
मोरङको सुन्दरहरैँचा ३ मा बनेको जेष्ठ नागरिक भवन २८ लाखमा निर्माण भएको भनेर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ । सो योजनाको सम्झौताको फायल भने नगरका कर्मचारीले नै लुकाएका छन् ।
बुधबार सो भवनको योजनाका बारेमा बुझ्नका लागि नगरका लेखा अधिकृत शेखर ढकाल, इन्जिनियर सुनिल अधिकारी, वडाका जनप्रतिनिधी, प्रत्रकारहरु संयुक्त रुपमा सो भवन निर्माण स्थल पुगेका थिए । भवन निर्माण स्थलमा पुग्दा स्थानीयको तिब्र गुनासो थियो । स्थानीयहरुले जेष्ठ नागरिकका लागि भनेर बनाइएको भवनमा २८ लाख कुनैपनि हालतमा खर्च नहुने जिकिर गरे ।
जेष्ठ नागरिकका लागि भनेर बनाएको भवन आफुहरु जिम्मा नलिने र सो भवनको उपभोग पनि नगर्ने जेष्ठ नागरिक वडा नं. ३ का अध्यक्ष भिमबहादुर कार्कीले बताए । अघिल्लो वर्ष रु. ३ लाखमा छेवैमा हात्तिपाइले लगाएर निर्माण गर्दै गरेको भवनको काम करिब ५० प्रतिसत सकिएको छ तर २८ लाखमा सम्झौता गरेर ट्रस्टको छाना लगाएर लाखौँको अनियमितता गरेको आशंका पछि जेष्ठ नागरिकले सो भवन उपभोग नै नगर्ने भएको हो ।
वडाले पनि पटक पटक उपभोक्ता समिति मार्फत काम गर्न पहल गरेको तर नगरका कर्मचारीले आलटाल गरेर टेन्डर मार्फत नै काम गर्नुपर्ने बाध्यता देखाएको वडा अध्यक्ष जीवन प्रसाद ढुङ्गानाले बताए । कर्मचारीको मिलेमतोमा टेण्डर मार्फत काम भएकाले चरम आर्थिक चलखेल भएको हुनसक्ने सरोकारवालाहरुको अनुमान छ ।
सो भवन निर्माणको स्टिमेट बनाएका इन्जिनियर सुनिल अधिकारीले काम निरन्तर चलिरहेको र अझै सोलार पावर, शौचालय, पेटी, माटो पुर्ने लगाएतका काम बाँकी रहेको बताए । हाल २३/२४ लाखको काम भएको र अब बाँकी काम हुने अधिकारीको भनाइ छ तर यता निर्माणको ठेक्का पाएको सावना निर्माण सेवाका अब्दुल हुसेनले आफ्नो काम भवन बनाउने र भित्र जिप्सन सम्मको काम मात्रै रहेको बताएका छन् । चौतर्फी दवाव भएपछि काम थपेर बढी काम गर्न बाँकी रहेको कर्मचारीहरु देखाइरहेका छन् ।
नगरका योजना अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको टिमले पनि हचुवाका भरमा रकम निकासाका लागि सिफरिस गरेको छ । उपप्रमुख धनमाया तामाङले आफुहरुले फायल नै राम्ररी अध्ययन नगरेको, प्राविधिक काम इन्जिनियरको टिमले गर्ने भएकाले अब काम कति भएको भनेर भुक्तानी स्टिमेट आएपछि आफुले गहिरिएर हेर्ने भनेर गैर जिम्मेवार जवाफ दिएकी छन् जवकी अनुगमन समितिकै सिफारिसमा लेखामा करिब २०/२१ लाखको चेक भुक्तानीका लागि तयारी अवस्थामा रहेको छ ।
भवन हेर्नका लागि संगै पुगेका लेखा अधिकृत शेखर ढकालले काम भएको भनेर भुक्तानीका लागि आएको तर चेक लगिनसकेको बताए । अब विवाद आएपछि काम मुल्याङ्न गरेर मात्रै भुक्तानी गर्ने ढकालले बताए ।
हाल भएको काम करिब १० देखि १२ लाख सम्मको हुनसक्ने अधिकांशको अनुमान छ तर अझैपनि सो भवनको अहिले २४ लाख लागत मुल्याङ्कन भएको भनेर इन्जिनियर अधिकारीले बताइरहेका छन् ।
काम गर्नका लागि के के विषयमा सम्झौता भएको थियो भनेर नगरमा इस्टिमेट माग गर्दा कर्मचारीहरुले ३ घण्टा सम्म विभिन्न शाखामा घुमाएर इस्टिमेट नै दिएनन् । यसको अर्थ के ? यसमा ठुलो आर्थिक चलखेल भएको छ भन्दा फरक पर्ला र ? नभए किन पास भएको इस्टिमेट दिइएन ?
यस विषयमा नगर प्रमुखसंग बुझ्न खोज्दा सम्पर्क नै हुन सकेन । यता उपप्रमुखलाई इस्टिमेट उपलब्ध गराउन पहल गरिदिन भन्दा भन्दै उपमेयर कार्यालयबाट बाहिरिएपछि यो योजनामा क–कस्को हात छ भन्ने आशंका अझै थपिएको छ ।
सुनसरीको सावना निर्माण सेवाले यो भवन निर्माणका लागि २७ लाख ८५ हजार ८३७ रुपैयामा ठेक्का पाएको हो । ४० फुट लम्बाइ र ३२ फुट
चौँडाइ भएको भवनमा ६ वटा झ्याल र २ वटा ढोका राखिएको छ । यो भवनमा हात्तीपाइलेको त कुरै छाडौँ पिलर समेत राखिएको छैन् । ट्रस्ट लगाउनका लागि फलामको सामान्य पिलर गाह्रोमा लगाइएको छ, शौचालयको काम ५० प्रतिसत पनि भएको छैन्, प्लास्टरको काम अझै बाँकी नै छ, झ्याल, ढोका लगाउन अझै बाँकी छ तर प्लास्टर नै नगरी कलरको काम भने धमाधम भइरहेको छ । एक इन्जिनियरिङ कन्सलटेन्सीका सञ्चालकले भने यतिको भवन सम्पन्न गर्नका लागि ८ देखि १० लाख खर्च हुन्छ । सामान्य तरिकाले हेर्ने हो भने पनि ५० प्रतिशत रकम पनि खर्च हुने देखिदैन । यतिका धेरै रकम कहाँ कस्को खल्तीमा जाँदैछ स्थानीयले खोज्ने बेला आएको छ ।